Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo mooshin ka keenay Heshiisyada uu galay Madaxweyne Farmaajo
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2018
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa goor dhow ansixiyay Hindise sharciyeedka xuquuqda Siyaasiyiinta dowladda oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka doodayeen Xildhibaanada.
Sagal Radio Services • News Report • September 18, 2018
Xildhibaan Maxamuud C/raxmaan Beene Beene ugu baaqay Xildhibaanada Golaha Shacabka inay hurdada ka kacaan, isla markaana la soo laabtaan doorkooda la xisaabtanka Xukuumadda, isagoo caddeeyay in Ra’iisul Wasaaraha uu qaatay doorkoodii la xisaabtanka.
Kulankii Baarlamaanka ee qorshihiisa ahaa hadal jeedinta Jawaari oo baaqday iyo muran ka taagan….
Sagal Radio Services • News Report • April 11, 2018
Kulankii maanta oo Arbaco loo balansanaa in Guddoomiyihii is casilay Maamed Sheekh Cismaan Jawaari uu ka jeediyo Fadhiga Baarlamaanka ayaa baaqday, iyadoo uu soo baxayo muran iyo is qab qabsi ka dhashay habka kulankaas loo qabanayo.
Sagal Radio Services • News Report • March 25, 2018
Sagal Radio Services • News Report • March 24, 2018
Xildhibaan Fiqi “Xildhibaanada Golaha shacabka waxay isku dhaarsadeen in la badbaadiyo Baarlamaanka”
Sagal Radio Services • News Report • March 19, 2018
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Xildhibaanada Golaha Shacabka ay isku dhaarsadeen sidii loo badbaadin lahaa Baarlamaanka, oo uu ugala jeeday Guddoomiye Jawaari.
Daawo: Xildhibaanadii Mooshinka ka keenay Jawaari oo sharci darro ku tilmaamay go’aankii Guddiga Joogtada
Sagal Radio Services • News Report/Video • March 14, 2018
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee mooshinka ka keenay Guddoomiye Jawaari ayaa sharci darro ku tilmaamay go’aankii Guddiga Joogtada ay ku laaleen Mooshinkooda, iyagoo xusay in laga been abuurtay Xildhibaanada qaar ee la sheegay inay ka laabteen Mooshinka.
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeer dalka looga mamnuucay Shirkadda DP World
Sagal Radio Services • News Report • March 12, 2018
Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa isku raacay xeer dalka looga mamnuucayo Shirkadda DP World, kaddib markii ay si bareer ah uga soo xadgudubtay madax banaanida iyo Midnimada Soomaaliya.
Sagal Radio Services • News Report • December 31, 2017
Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka oo maanta ka shiraya darbiga ay Kenya ka dhisayso Xadduuda gobalka Gedo.
Sagal Radio Services • News Report • December 30, 2017
Guddiga difaaca ee Baarlamaanka Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan deg deg ah ka yeelanaya wararka sheegaya in Dowladda Kenya ay darbi ka dhisayso Xadduudda ay Soomaaliya iyo Kenya ka wadagaan Degmada Belad-xaawo ee gobalka Gedo.
Sagal Radio Services • News Report • January 31, 2015
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow ogolaaday codsiga Ra’iisul Wasaaraha ee 10-ka cisho, kaasoo ahaa inuu ku soo dhameystirayo Golihiisa Wasiirada, iyadoo codsigaas uu dhaliyay buuq badan oo ay kala hor-yimaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka.